VaTsvangirai naAmai Mujuru Vonyorerana Chibvumirano cheMushandirapamwe
VaTsvangirai naAmai Mujuru Vonyorerana Chibvumirano cheMushandirapamwe	April 19, 2017 c263afri Matongerwo eNyika Leave a comment	WASHINGTON — Mutungamiri webato reMDC, VaMorgan Tsvangirai, nemusi weChitatu vakanyorerana muHarare chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda pamwe chete naAmai Joice Mujuru vebato reNational People’s Party.
Chibvumirano ichi chakanyoreranwa kumba kwaVaTsvangirai kuHighlands.
Chibvumirano ichi chiri kuuya panguva iyo vatsigiri vemapato anopikisa vari kukurudzira kuti vabatane sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa kuitira kuti vawane mukana wekukunda mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nebato ravo reZanu-PF.
Munyika mune mapato anopikisa anodarika makumi mashanu.
Vachitaura mushure mechibvumirano ichi, VaTsvangirai vati zvavaita izvi zvichaitikawo pakati pebato ravo nemamwe mapato ezvematongerwo enyika munguva inotevera.
Masvondo mashoma apfuura, Amai Mujuru vakaudza vatsigiri vavo kuMasvingo kuti vakanga vava pedyo nekunyorerana chibvumirano nebato raVaTsvangairai.
Mumwe mutevedzeri waVaTsvangirai, VaNelson Chamisa, vanoti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru mukuumba mushandirapamwe munguva yesarudzo.
Pekupinda Napo Kuti Muone Zvamuri Kuda Pop-out player
Tsvangirai and Mujuru form alliance to challenge MugabeKasukuwere fighting for political survival